Nhau - Pique Mesh Jira
1. Tsananguro uye kupatsanurwa kwezita reiyo pique mesh:
Pique mesh: mune yakafara pfungwa, iri izwi rakajairika kune concave-convex dhizaini yemicheka yakarukwa. Nekuti jira rine yunifomu yakarongedzwa isina kuenzana mhedzisiro, iyo nzvimbo inosangana neganda iri nani pane yakajairwa imwechete jersey maererano nemhepo yekupisa uye kupisa kupisa, uye kunyaradza kweziya. Mupfungwa nhete, zvinoreva nzira-ina, imwe-kutenderera, jira rakasungwa-rakarukwa nejesi muchina. Nekuti kumashure kweshinda kunoratidzira quadrangular chimiro, inowanzodaidzwa kuti quadrangular mesh muindastiri.
Iko kune zvakare yakajairika mbiri pique mesh. Sezvo kumashure kwejira kune hexagonal chimiro, inowanzo kunzi hexagonal mesh muindasitiri. Nekuti chimiro chisina kuenzana kumusana chakafanana nenhabvu, inonziwo mesh yenhabvu. Mucheka uyu unowanzo shandiswa senge kumberi kwembatya mune hexagonal maitiro kudivi rekumashure.
Izvo hazvina kukodzera kushandisa mesh kudaidza pique mesh, nekuti jira harina pachena mhango mesh. Uye dzimwe shanduro chaidzo dzinotaridza senge ina-makona meshes uye hexagonal meshes inoda kumwezve kusimbiswa kwemachira kuronga uye maitiro Iko kukanganisa kwekushandura pakati peyakarukwa mhezi-mizinga mesh uye matanhatu-muzinga mesh?
Inotorwa kubva mukushandurwa kweye-peced pasi mesh kana kaviri-peced pasi mesh, akasiyana masitayera akasiyana eimwe-mativi pique mesh mamiriro anogona kugadzirwa. Kusanganisira mamwe machira anogona kurukwa achichinjaniswa nemapiyeti nemajezi, kune mitsetse yakatwasuka, mitsetse yakatwasuka, zvikwere, nezvimwewo. Izvo zvakare zvinokwanisika kubatanidza mamwe marudzi emachira kuburikidza nejacquard.
Makina maviri akasendama ekuruka anewo mamwe machira, ayo ane concave-convex mamiriro, anonzi maviri-mativi pique mesh mune dzimwe nzvimbo. Ziva kuti inoda kusiyaniswa kubva paviri-chigamba mesh pane imwechete jersey kuruka michina. Kuimba kaviri uye machira eemhando mbiri, shinda-yakashongedzwa komputa hombe loop mavara marara, komputa jacquard, komputa yakarembera warp, modal / bamboo fiber / tencel / mvura-inotora uye yekutsvaira-kunanzva fiber / inorwisa mabhakitiriya faibha / organic kamba uye imwe tambo. Iyo ingangoita yepamusoro-kumagumo akasiyana siyana e pique mesh machira.
2.The mhando pique pajira riya:
Ruvara-ruvara-mutsetse mitsara imwe pique mesh machira
Tambanudza imwechete pique mesh ine spandex
Yakadhindwa kaviri pique mesh
Plain kaviri pique mesh
3. Apparel Kushandiswa kwePique Mesh
Ruvara-ruvara-ruvara mitsetse T-shirts anga achizivikanwa kwemakore mazhinji, T-shirt jira rakakodzera vese varume nevakadzi. Kuburikidza nekuumbwa kwemucheka, iwo maratidziro (kukora kwakasiyana uye kusaenzana), kudzikira kwemavara, shanduko yehupamhi hwemitsipa, uye dhizaini nekushandurwa kwemamwe masitayera ekupfeka, akapfuma maT-shirts anogona kuchinjwa. .
Garwe shati ine yakasarudzika mavara mabara. Kunyangwe jira repiri pique rakatumidzwa zita rekuti "Lacoste".